Masar: 16 ka mid ah dagaalyahanada Daacish oo lagu dilay howlg... | Universal Somali TV
Masar: 16 ka mid ah dagaalyahanada Daacish oo lagu dilay howlgal milatari oo ka dhacay Sinai.
Militiriga Masar ayaa Axaddii shaaca ka qaaday in 16 dagaalyahaniin ah, iyo laba askari la dilay afartii maalmood ee la soo dhaafay intii lagu jiray hawlgal militeri oo ka dhan ah jihaadiyiinta Islaamiga ah ee Sinai.
Ciidamada ayaa bilaabay olole fara badan kadib markii madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi, uu siiyey seddex bilood oo kama dambeys ah si loo burburiyo oo looga saaro dagaalyahanada ISIS gacanka Sinai.
Al Sisi ayaa ku dhawaaqay amarka ugu dambeeyay bishii November kadib markii dagaalyahano la tuhunsan Daacish ay ku dileen in ka badan 300 oo qof masjidka Suufida ee ku yaalla Sinai.
Tan iyo markii ay ciidamada militeriga, uu hogaaminayay Sisi, ay afgambiyeen madaxweynihii Ikhwaanul Muslimka ahaa ee Maxamed Morsi sanadkII 2013-ka, ciidamada ammaanku waxa ay dagaal xoogan kula jiraan dagaalyahanada Daacish ee ku sugan deegaanka Sinai .
Dagaalyahanada ayaa waxay dileen boqolaal askari, boolis iyo dad rayid ah, badiba waqooyiga Sinai, laakiin sidoo kale meelo kale oo ka mida Masar.
Waxay sidoo kale ku dileen tira masiixiyiinta qaraxo lala beegsaday kaniisadaha iyo toogashooyinka, iyo sidoo kale qarxinta diyaarad Ruushka laga leeyahay oo ay la socdeen dalxiisayaal ka soo kacay dalka Masar 2015-kii, halkaas oo ay ku dhinteen 224 qof oo saarna diyaarada.
Kan-xigaSri Lanka: Qaramada Midoobay oo camba...
Kan-horeKenyaanka oo soo dhaweeyay wadahadalk...
38,734,489 unique visits